မြန်မာဘလော့ကာတို့ ၏ တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်များ: ဘလော့ရွာသူ တမူထူး၏
Posted by Burmese1001 at 10:06 AM
A faker? A charlaton?? :D
One word ...." speechless "
OMG ... ခြိမ်းခြောက်ထားလိုက်တာ ကြောက်ချာကြီးဘာလား မိမိငဲ့
ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်နှစ်ခါ ခိုးအုန်းမလဲလေ။
ခိုးတာ မလုပ်သင့်လို့ ဝေဖန်ရုံပဲရှိသေးတယ် သူခိုးကြီးမျိုးရိုးက ဆင်းသက်မှန်းတောင် သူ့ဘလော့မှာ ၀န်ခံနေပြီ သိလား။ ဒီလောက် ၀က် ၀က်ကွဲခိုးပြီး မျက်နှာပြောင်တိုက်တာတောင်မှ လူလိမ်ဆိုတာ လက်မခံကြသေးရင် ညလေးရေ ညလေးရေနဲ့ ၀ိုင်းမနေကြတဲ့ ဆိုင်းနောက်ထ ကိုကိုမမများ ၂၀၀၇ခုနှစ်က သူများချက်တဲ့ spaghetti စားပြီး ၀မ်းတော်လားစမ်းပါလေ့စေတော့။
anybody married to her ?
ops! sure she will be play around with their papa PSO or driver.
may be who know.
watch out man !!!
please tell her no need to shy.
အခုလို အဖြစ်မှန်တွေကို တိတိကျကျဖော်ထုတ်ပေးပြီး...ယဉ်ကျေးသော စာများနဲ့ ဝေဖန်တာကို အားပေးပါတယ်...။
အရင်ကလဲ ကျနော်..စကားလုံးသုံးတာတွေ ပြင်ဘို့ 
ကိုယ်က မှန်ပေမယ့် ကိုယ်သုံးတဲ့ စကားကြောင့် ကိုယ်က ဖောင်းဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်လို့ ပါ...။
အခုလို အရေးအသားလေးနဲ့ ကျ...လာဖတ်သူတွေ အဖြစ်မှန်ကိုလည်း သိရတယ်...
ကျနော့် ဘလော့ဂ်မှာ ရေးဘူးပါတယ်..
“ ငွေမပေးရဘဲ အလကားရတဲ့ ဘလော့ဂ်မှာတောင်
လိမ်ညာရေးမှတော့ ၊ဘာသုံးစားလို့ ရတော့မှာလဲ”
နောက် ဒီကလေးမ ရေးထားပါတယ်..
“ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကြီးအကဲ” တဲ့.....။
ဒါသူတို့ ဘာသာ သတ်မှတ်တာပါ...
တိုင်းသူပြည်သားက ချစ်ခင်စွာနဲ့ တရားဝင်ပေးထားတဲ့ 
နေရာ မဟုတ်ပါ....ဒီအတွက် လုံးဝ ထည့်မစဉ်းစားပါ...
ိကိုသစ်နက်ဆူးပြောတာ မှန်ပါတယ်.... ဝေဖန်တာ ဖြစ်ဖြစ် အမှားထောက်ပြတာဖြစ်ဖြစ်... မတရားတာကို မတရားကြောင်း ထောက်ပြတဲ့ နေရာမှာ... ကိုယ့်ဖက်က အမှားမပါအောင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ရေးတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်... အရှက်မရှိ.. အာဏာရူးတွေရဲ့ အမျိုးတော်ပါတယ်ဆိုပြီး... ကြွေးကြော် ခြိမ်းခြောက်နေတာ ရှက်တတ်ရင် ဘလော့ပိတ်ဖို့ကောင်းနေပါပြီ.... သူ့ဖက်က လိုက်လံ အားပေး ထောက်ခံ နေတဲ့သူတွေလည်း အမှန်ဖက်က ရပ်တည် ရေးသား ဆုံးမသင့်နေပြီလို့..ထင်ပါတယ်.... အထူးသဖြင့် အမေရိက က မောင်တီးတို့.. ကိုရန်အောင်တို့... အမှန်ဖက်က ရပ်တည်ရေးသားသင့်နေပါပြီ...... တိုင်းပြည်ကို လိမ်ညာ ခိုးဆိုးနေတဲ့သူရဲ့ သွေးကို ဘလော့လောက က လူတွေက မဆုံးမ နိုင်ကြတော့ဘူးလား.... သိချင်ပါတယ်.....အမှန်ကို မြင်နိုင်ကြပါစေ....
အချက်အလက် တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖော်ထုတ်ပေးတာရော၊ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ သုံးထားလာရော ချီးကျူးပါတယ်။
ဖတ်ရင်း ရယ်နေရတာ ခုထိပဲ။ တခြား စိတ်ညစ်စရာတွေတောင် မေ့သွားတယ်။
အနွေးထည်အင်္ကျီပို့စ် ဖတ်ပြီးတော့ မသင်္ကာလို့ အရင်လို ကော်ပီတွေများလားဆိုပြီး အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်သေးတယ်။ မတွေ့ဘူး။ ခင်ဗျားတို့် ဘယ်လိုများ ရအောင် ရှာလိုက်တာလဲ။ နည်းလေး ဝေမျှပါဦးဗျာ။ တကယ် လေးစားပါတယ်။
You can do this method for the photo look up -
1) Go to http://soemyanandarthetlwin.blogspot.com/search?updated-max=2008-11-27T15%3A08%3A00Z&max-results=3
2) Double click the photo Spaghetti with Smoked Haddock and Prawns
Pop up windows may appear with the photo only as http://1.bp.blogspot.com/_aMtDb5MlN2k/SSyKjc65pzI/AAAAAAAABfE/Y-48uIArH9g/s1600-h/2759013795_9783a12145.jpg
3) Right click the photo, and choose property. Another window may appear as element properties.
4) Copy the last line - 2759013795_9783a12145.jpg
5) Do google search under "IMAGE" tab. You will get the search result http://images.google.com/images?q=2759013795_9783a12145.jpg&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&sa=N&tab=wi
5) Double click the photo - http://images.google.com/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3063/2759013795_9783a12145.jpg%3Fv%3D0&imgrefurl=http://flickr.com/photos/luscioustemptations/2759013795/&usg=__nYl8T-pzOZCs-inPsUN2WaMJdek=&h=375&w=500&sz=159&hl=en&start=1&sig2=Omd44TOTb_-0AJ4qYahSCQ&um=1&tbnid=795s9KEr47rAqM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=LwAvSeHzKYuksAPlnZD1CA&prev=/images%3Fq%3D2759013795_9783a12145.jpg%26um%3D1%26hl%3Den%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DN
သူက julystar blog ကိုတောင်link လုပ်ထားသေးတာ..
I solute you for the technic of finding her copy photos. U must haveagood IT background. I am happy to read that ur post has been more merrier to read compare to last time. More polite way but still funny. U are really good writer. Thank for the info and enlighten the rest of the blogger who don't know anything. I am nither her enemy nor ur friend. But i do appreciate own work. Keep on writing.
ha ha . Admire yr work. Great job. I dun mind if that person is using all those stuff and give credit to the owners. But that Oxford Lady is totallyapain in the ass. LOL
တကယ့်အပြင်မှာ ဒီလို လူမျိုးကို မျက်နှာ မော်ကြည့်ဖို့ မပြောနဲ့ လေလေးနဲ့တောင် တောက်လို့မှ မရတာပဲလေ။ ရမယ်ဆို လုပ်ကြည့်လိုက်။ ဘာဖြစ်သွားမလဲ သိသွားမှာပေါ့။
ကြောက်ပြီး ရှက်ပြီးများ ဘလောဂ့် ပိတ်သွားမယ် ထင်နေလား။ ဘယ်သူ ဘာပြောပြော ဘာထင်ထင် ဒီဘလောဂ့် ဒီအတိုင်း ရှိနေမှာပါပဲ။
တော်တော်အရှက်မရှိတဲ့ဟာမပဲ။ ဒီဟာမဟိုတစ်ခါလုပ်သလိုပဲ နောက်တစ်ခါ အရှက်မရှိထပ်လုပ်ပြန်ပြီ။ ဒါကို မျက်နှာပြောင်တိုက်တယ် ခေါ်တယ်။ အရှက်မရှိစာဖတ်သူကိုလည်းစော်ကား သေးတယ်။ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါဗျာ။ သူခိုးမျိုးရိုးပဲ။ မခိုးရရင် ဘယ်နေနိုင်မလဲ။
ခင်ဗျားတို့ကို အရမ်းချီးကျူးတယ်ဗျာ။ နောက်ထပ်လည်းဒီဟာမထပ်ပြီးခိုးနိုင်ပါစေ။ ခင်ဗျားတို့ လည်း ရှေ့ဆက်ပြီးအဲဒီသူခိုးမကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပါစေဗျာ။
အင်း... ခများတို့ ဘလောဂ့် စစခြင်းမှာ ချီးကျူးမိလို့ ကျနော့်နှယ် သူများ အသားလွတ် အထင်ကြီး ခံလိုက်ရပြီးကတည်းက ခပ်လန့်လန့်ဖြစ်နေတာ... အခု ခများ အရေးအသား သိပ်ကောင်းလွန်းတာ မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်တော့လို့ပါဗျာ... တကယ်ကောင်းတယ်။ :) သခိုးကိစ္စနဲ့တော့ ဘာမှမပြောတော့ပါဘူး။ အရပ်က ၀ိုင်းရိုက်တာနဲ့ လုံလောက်နေပါပြီ။ :D
Ye Lin Ko said...
(ဆက်သွယ်ရ မလွယ်လို့ လာဖတ်နိုင်မယ့် ၁၀၀၁ ဘလော့ကို လာရေးလိုက်တာ ဘလော့ရှင်တွေကို တောင်းပန်ပါတယ်။)
ညီမလေး စိတ်ထဲက ဖြစ်ချင်တာတွေကို စိတ်ကူးယဉ် ဖန်ဆင်းပြီး ရေးတာ ညီမ စိတ်ချမ်းသာရမှန်း နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက ညီမကျန်းမာရေးပါ။
စိတ်ပညာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ အစ်မတစ်ယောက်လို အကြံပေးချင်တယ်။ ဒါ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထုတ်ပြောနေစရာ မလိုပါဘူး။ လူလဲ မသိပါဘူး။ ညီမလေး ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ပါ။ ပြောပြပြီး အကြံဥာဏ်ယူပါ။ စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ဘာသာတရား အကူအညီလဲ ယူပါ။ အစ်မတို့လဲ လောကဓံ ကြုံလာရင် ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမတွေနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံရပါတယ်။ မဟုတ်ရင် စိတ်ကို လွှတ်ချင်တိုင်း လွှတ်ပေးထားမိပြီး ဂယောက်ဂယက် ဖြစ်သွားပြီပေါ့။
စိတ်ပညာ ဆရာဝန်တွေကို သူတို့ဆီက ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေ၊ သူဌေးတွေလဲ လာတွေ့ကြပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးလာရင် လုပ်နေကျပါ။ ဒါ ကိုယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုတော့ ဆရာဝန်ကလဲ ဘယ်သူ့မှ ထုတ်မပြောရပါဘူး။ ညီမလေး မိဘအရွယ် စိတ်ပညာ ဆရာဝန်ကြီး တစ်ယောက်ကို သွားတွေ့ပါ။ မိခင်ဖခင်လို သဘောထားပြီး အကြံဥာဏ်ယူပါ။
ကိုယ် ဖြစ်ချင်သလို မဖြစ်တာ လူ့သဘာဝပါ။ ချမ်းသာချင်တာ၊ မိဘ ဂရုစိုက်ခံချင်တာ၊ ပညာတော်ချင်တာ၊ ချမ်းသာတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက မွေးဖွားသူ ဖြစ်ချင်တာ၊ အရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက် ရချင်တာ စတဲ့ ညီမရဲ့ စိတ်ထဲက ဆန္ဒတွေကို ဖောက်ခွဲမိရာကနေ ညီမ မလိုချင်ဆုံး အကျိုးဆက်တွေ အခု ရကုန်ပြီ။
ကိုယ်က လူတကာ ဝိုင်း ဂရုစိုက် ခံရသူ ဖြစ်ချင်ရင် ကိုယ်က လူတွေကို ဂရုစိုက်ပေး၊ မေတ္တာထားပေးရင် ညီမ အလို ပြည့်မှာပါ။ အခု ရင်ထဲက ဆန္ဒတွေ ပြည့်ချင်ရင် စိတ်ကူးယဉ်နေလို့ မရပါဘူး။ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဆရာတော် ဦးဇောတိကတို့၊ အရှင်ဆန္ဒာဓိကတို့၊ ဆရာတော် ရဝေနွယ်တို့ စာတွေ၊ မင်းကွန်းဆ၇ာတော်ကြီးရဲ့ တရားတွေမှာ အဖြေရှိပါတယ်။ ညီမလေး ရှာဖတ်ကြည့်၊ နားထောင်ကြည့်ပါ။
ဘာသာရေးစကားတွေ ဘာကြောင့် လာပြောနေရသလဲဆိုတော့ ညီမငယ် ခံစားနေရတာတွေက ဘာသာရေးနဲ့မှ ဖြေရှင်းနိုင်မှာမို့ပါ။ တော်ရုံ ကြီးပွားချမ်းသာချင်တယ်ဆို အလုပ်ကြိုးစားလုပ်၊ ဥာဏ်လဲစိုက်လို့ ပြောရင် လုံလောက်ပါတယ်။ ညီမက ချမ်းသာချင်ရုံတင်မကဘူး။ ကံနဲ့ပါ ဆိုင်တဲ့ ရုပ်လဲ လှချင်တယ်၊ ကျော်လဲ ကျော်ကြားချင်တယ်၊ ဂရုစိုက်လဲ ခံချင်တယ် စတဲ့ ဆန္ဒတွေပါ ရှိလာလို့ ကံကောင်းအောင် အရင်ပြင်ရမှာမို့ ဘာသာရေးအကူအညီ ယူဖို့ အကြံပေးတာပါ။
မဟုတ်တာ ပြောလို့ လူလေးစားတယ်၊ အထင်ကြီးခံရတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး ညီမလေး။ မသိခင် ခဏပါ။ ညီမလေး မှန်တဲ့ စကားကိုပဲ ပြောတာကို တစ်လလောက် အကျင့်လုပ်ကြည့်ပါ။ အကျင့်လုပ်ကြည့်ရင်း စိတ်ချမ်းသာလာပြီး နောက် လိမ်ပါဆိုတောင် မလိမ်ချင်တော့တဲ့သူ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ညီမငယ်ဟာ အင်တာနက်လဲ စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်၊ လွတ်လပ်တဲ့ နေရာမှာလဲ နေရ၊ ကံသိပ်ကောင်းနေသူပါ။ ပြည်တွင်းမှာ ကုန်းကောက်စရာ မရှိအောင် ဆင်းရဲနေတဲ့ တို့ပြည်သားတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ညီမ ဘယ်လောက် ကံကောင်းလဲ သိမှာပါ။ ဒီလောက်ဆို လောလောဆယ် ရောင့်ရဲကျေနပ်ပြီး ဒီထက် ဆက်တိုးတက်အောင် ရိုးရိုးသားသား ကြိုးစားပါ။
ညီငယ်တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ယောက်ျားဖြစ်ရတာ ဘာမှ ရှက်စရာ မလိုတာမို့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် မိန်းကလေးအဖြစ် စိတ်ဖန်ဆင်းနေမိတဲ့ အကျင့်ကို ဖျောက်လိုက်ဖို့ မောင်ငယ်လို အကြံပေးပါရစေ။
ညီမဖြစ်ဖြစ် မောင်လေးဖြစ်ဖြစ် တရားရိပ်သာ တစ်ခုမှာ တစ်လလောက်၊ အချိန်မရရင်လဲ ၁၀ ရက်လောက် တရားအားထုတ်ပြီး စိတ်သစ်လူသစ် ဘဝသစ် မွေးမြူဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ အကောင်းဆုံး ခွန်အားဥာဏ်အားတွေ ရလာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီကျရင် ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ လူသားတစ်ယောက်အဖြစ် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာနယ်ထဲ တစ်ကျော့ပြန် လာခဲ့ပါ။ အောင်မြင်မှာပါ။
ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက ညီမကျန်းမာရေးပါ။
စိတ်ပညာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ အစ်မတစ်ယောက်လို အကြံပေးချင်တယ်။ ဒါ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထုတ်ပြောနေစရာ မလိုပါဘူး။ လူလဲ မသိပါဘူး။
ဒီတစ်ယောက်ကပြောမှ နန်နန်လဲ ရစရာကို မရှိတော့ဘူး... အီးဟီးဟီး...
ကြည့် ရှုရန်းတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။သို့ မှ
စစ်အစိုးရ မျိုးဆက်ပဲကွာ။ မျက်နှာပြောင် တိုက်ရဲတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ သူ့ ဟာသူ ဘယ်သူ့သမီး မကလို့ ဘာကြီးပဲ ဖြစ်နေနေ လူဟာ လူပါပဲ။ လူကြားထဲမှာ နေရင် လူ့ ကျင့်ဝတ်ကို လိုက်နာပါရတယ်။ ကိုယ်က ဘယ်သူ့သမီးမို့ဘယ်ဝါ့သမီးမို့မာန်တွေ စွတ်တက်ပြီး ကြိမ်းမောင်းနေတာ သိပ်ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ရှက်တတ်ရင် လဲသေလိုက်လို့ရနေပါပြီ။
စစ်အစိုးရ မျိုးဆက်ပေမို့ ပါပဲ။
ပြောချင်ရာ ရှက်ရမ်းရမ်း ရူးနှမ်းနှမ်းနဲ့ပြောပြီး ကွန်မန့်ပိတ်ထားတယ်။ သတ္တိရှိတယ်ဆိုရင် ဖြေရှင်းပေါ့။
ဂုဏ်ပကာသနတွေနဲ့ပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင် နေနိုင်နေပေမယ့်လည်း၊ စိတ်ဓာတ်က မြေကြီးထဲကကို မထွက်နိုင်တာ တော်တော်လေး သနားဖို့ကောင်းတယ်။
အစ်ကိုရေ Bravo! ညီမတို့လို ဘလော့လောကမှာ စမ်းတ၀ါးဝါးသမားတွေဆိုရင်တော့သူဘာလုပ်နေနေ သိမှာမဟုတ်ဘူး။ အရေးအသားတွေကြည့်ပြီး အမြင်ကပ်နေတာပဲရှိတယ်။ အခုလိုပြောပေးမယ့်သူတွေရှိနေတော့ ဘလော့လောကကြီး သန့်ရှင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရှက်ရမ်း ရမ်းပြီး ရေးထားတာတွေက စိတ်မနှံ့ သူတယောက် မှန်းသိသာပါတယ်။
ကျမကတော့ မစိုးမြတ်နန္ဒာသက်လွင် အကြောင်းမသိသလိုယခုဘလော့ကိုလည်း ခုမှ ၀င်ဖတ်တဲ့ လူဖြစ်ပါတယ်..ဒါပေမဲ့ ကျမအနေနဲ့ တွေ့ ရတာ တခုကတော့ လူတယောက်စာတခုကို ရေးတယ်ဆိုတာ လူတွေကို ရသတခုခု ဖြန့် ဝေပေးတာမျိုး (သို့ ) သတင်းတခုခုဖြန့် ဝေတာမျိုး ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဘလော့ရေးကြပါတယ်..ဒါပေမဲ့မနန္ဒာ ရဲ့ ဘလော့က စာဖတ်သူတွေကို ဘာအကျိုးမှ မရစေပဲ လူတွေကို လောဘ အလိုရမ္မက်ကြီးအောင် ဆွဲဆောင်နေတာနဲ့ တူနေတယ် မြန်မာပြည်မှာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး မွဲတေ နေသူများကို ကိုယ်ချင်းမစာလျှင်သော်မှ အားနာသင့်တယ်..ကျမ ဆိုလိုတာက မနန္ဒာဘယ်လို ပဲနေနေ ဘယ်လိုပဲစားပါစေအုံးတော့ ဘလော့တခုပေါ်မှာ အကြီးအကျယ်နဲ့ ရေးရမဲ့ ကိစ္စတခုမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တယ်..ဒါမျိုးက ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူတိုင်း နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ လူတိုင်း ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ နေ့ စဉ်အလုပ်တွေပါ.. ဘလော့ပေါ်မှာ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပြီး ကြွားသလိုလို ဘာလိုလို လုပ်နေမဲ့ အစား ကိုယ်ပိုင် ဒိုင်ယာရီထဲမှာရေးတာက ပိုအကျိုးရှိမယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်..မနန္ဒာပြောသလို မကြိုက်ရင်လာမဖတ်နဲ့ ပေါ့ အချိန်ကုန်တယ်ဆိုသလိုပဲ မှန်ပါတယ်အချိန်ကုန်တဲ့ဘလော့တခုကို နောက်လည်းဖတ်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိတော့ပါဘူး...
ကျမသည် ခရစ်စမတ် ကျောင်းပိတ်တော့မည်ဖြစ်သဖြင့်ပထမစန်မတ်စ်တာ စာမေးပွဲများနှင့်ပိနေရာမှ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်စေရန် ဘလော့များသို့ ဝင်ဖတ်လိုက်ရာ မစိုးမြတ်နန္ဒာသက်လွင်၏ ဘလော့လေးအားဖတ်မိလိုက်ရာ မျက်စိလည်းကျယ် ဥာဏ်လည်းပွင့်..ရီလည်းရီရ သဖြင့်ဘာပဲပြောပြော ကျေးဇူးတော့ တင်မိပါသေးသည်...မစိုးမြတ်နန္ဒာဆောင်းတွင်းစီးရန်ဝယ်ထားသည့် ဖိနပ်နှင့် ၂Gရိုက်ပေးသည်ဆိုသော အောက်ပိုင်းအလှပုံပါဖိနပ်တို့ သည် ဆိုဒ်ခြင်းကွာခြားနေပါသည်.. စေတနာနှင့်သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်.. သတိထားပြီး ရေးပါရန်..။ ခေါင်မေလတ်
ရှက်ရမ်း ရမ်းပြီး ရေးထားတာတွေက စိတ်မနှံ့ သူတယောက် -စိုးမြတ်နန္ဒာသက်လွင်
I am angered and disgusted by the theft of my photographs and material; used and passed off as another's original piece of work. I appreciate that I do not understandamajority of what is written on your blog, nor in the blog where my original material has featured, but I kindly ask for more information on on this theft, if you have any.
Ohh dear.. "SMNTL" watch out! real owner is coming"Luscious Temptations".
၁၀၀၁ တို့ကို အနှီဖော်ထုတ်မူအတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ ဂျူလိုင်စတားထဲက ကြည့်နေတာတော့ ကြာဘီ..။ ဒီလိုမျိုးမငြင်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေထိရောက်အောင် ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ အရည်အချင်းကို မလေးစားဘဲ မနေနိုင်ဘူး..။ကျနော်လဲ တစ်ခါတစ်လေ ဟာသတွေရေးရင် အင်္ဂလိပ်ဟာသတွေကို မြန်မာလိုပြန်မိပါတယ်။ အခုမှ ရှက်ရကောင်းမှန်းသိပြီ။
စိုးမြနန္နာသက်လွင်ဆိုတဲ့ (ရှည်လိုက်တဲ့ နာမည်....) အနှီအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုလည်း အလုံးစုံသိအောင် စုံစမ်းပေးစေချင်တယ်။ ပိုပြီးရှက်စေချင်လို့ပါ..။
တခြားမြန်မာဘလောခ့်ဂါတွေလဲ copy right ကို သတိထားရှောင်နိုင်ကြရအောင်ပေါ့။
ဒီလောက်မျက်နှာပြောင်တိုက် လိမ်ရဲမှတော့ ထိုအမျိုးသမီးဟာ မိန်းမကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ပိုက်ဆံချမ်းသာတောင်မှ ပျက်စီးတဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဖြစ်မယ်..။
`အလိမ်အနှက် အကြွားအ၀ါဘလောခ့်ဂါပိုင်ရှင် စိုးမြတ်နန္နာသက်လွင်´ပြောသမျှလဲ မယုံကြပါနဲ့လို့သာ
ထိုဘလောခ့်အားမသွားချင်းဖြင့် အစော်ကားခံ ရန်မှ လည်းကောင်း၊ သူမလိုချင်တောင့်တလျက်ရှိသော ဘလောခ့်ဟစ်တက်ရန်မှ လည်း ကာကွယ်ကြပါကုန်...။
အခု၊ “စိတ်တိုနေတယ်။ တိုတာမှ တစ်စက်စက် တုန်နေလောက်အောင်ကို စိတ်တိုနေတယ်”။ ဒီအကြောင်းကို ရေးသင့်၊ မရေးသင့် စဉ်းစားနေတာကြာလှပြီ။ ဟန်မဆောင်တတ်တဲ့ ကျမ၊ စိတ်ထဲရှိရာ ပြောရမှ ကျေနပ်တဲ့ ကျမ ၊ ဒီစာကို ရေးဖို့ကို စဉ်းစားခဲ့တာ တစ်လ ကျော်ခဲ့ပြီ။ အခုတော့ “ဆက်လက်သည်းညည်းမခံနိုင်တော့လို့ ဖြစ်ချင်တာဖြစ် ပေါက်ကွဲပစ်လိုက်တော့မယ်”။
ဒီလိုရှင့်။ "ကျမမှာ အချိန်မရှိဘူး၊ အချိန်မရှိဘူး." ....လို့ ပို့စ်တွေထဲမှာ ခဏခဏ ထည့်ရေးဖူးတာ သတိထားမိလားမသိဘူး။ အဲဒါ တစ်ကယ်ပြောတာရှင့်။ လူကြားကောင်းအောင် ၊ လူအထင်ကြီးအောင် လျှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။
ကျောင်းက တစ်ဖက်၊ အလုပ်ကတစ်ဖက်နဲ့ အားကို မအား။ တစ်ခါတစ်လေများဆို တစ်နေ့နေလို့ (5)နာရီ အိပ်ရရင် ကံကောင်းလို့ ပြောရလောက်အောင် အချိန်ရှားပါးတာ။ ဒီလောက်မအားတဲ့ကြားက မရရအောင် ပို့စ်ရေးတယ်။ (အိပ်ချိန်လျှော့ပြီးတော့ပေါ့။အဲလောက်ကို Blog ကို သံယောဇဉ်ရှိတယ်။ စာဖတ်သူတွေ လာလည်ရင် လာလည်ရကျိုးနပ်အောင်လို့ အတတ်နိုင်ဆုံး တစ်နေ့တစ်ပို့စ်ရအောင် ရေးတယ်။ ဘဝနဲ့ ယှဉ်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ စာမေးပွဲကာလတွေမှာတောင် “မရရအောင် ပို့စ်တင်ပေးသေးတယ”်။ ရူးတယ်ပဲဆိုဆို အဲလောက်ထိ Blogကို သံယောဇဉ်ကြီးတယ်။
ကျမက အဲလောက် Blogကိုသံယောဇဉ်ရှိ၊ စာဖတ်သူတွေကို အလေးထားသလောက် ကျမပြန်ရလိုက်တာကတော့ တော်တော် ခံပြင်းဖို့ကောင်းတယ်သိလား။ လူတွေ၊ လူတွေ။ တော်ရုံတန်ရုံပဲ ကြောကြရင် ကောင်းမယ်။ ဟုတ်တယ်။ ရေးရင်းနဲ့တောင် စိတ်တိုလာပြီ အဟုတ်။
“ဘယ်လိုလူတွေမှန်း မသိဘူး။ Blog ကို လာလည်တယ်။ စာတွေလာဖတ်တယ်။ Comment ရေးဖို့နေနေသာသာ၊ C-box မှာတောင် မနှုတ်ဆက်ဘူး။ ဘယ်လောက်တရားကျဖို့ကောင်းလဲ”။
“လာဖတ်တယ်ဆိုကတည်းက ကျမစာတွေကို ဖတ်ချင်လို့ပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။ ကျမစာတွေထဲမှာ သူတို့အတွက် အကျိုးရှိတာတွေကော၊ အကျိုးမရှိတာတွေကော ပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်”။ ဒါပေမယ့်၊ လာလည်ပြီး ဖတ်သွားပြီလေ။ “မဖတ်တောင် ရောက်တော့ ရောက်ခဲ့ပြီမလား။ ဘာလို့ C-boxမှာတောင် မနှုတ်ဆက်နိုင်ရတာလဲ။” “ဘာလို့ အဲလောက် ကြီးကျယ်ကြတာလဲ။ ဘာလို့ အဲလောက်လူပါးဝရတာလဲ။”
“C-box မှာ နှုတ်ဆက်ဖို့တောင် အချိန်မရှိရင် လာကိုမလာပါနဲ့လား။ သူများရေးထားတဲ့စာတွေကို အကြောကြီးနဲ့ လာဖတ်ပြီး နှုတ်တောင် မဆက်နိုင်လောက်အောင် ရှင်တို့က ဘာတွေမလို့လဲ””။
“”စာရေးသူကို အလေးမထားရင် လာကိုမလာကြနဲ့။ ရိုင်းတယ်ပဲ ဆိုဆို။ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ပြောလိုက်မယ်။
"နင်ရေးတာကို လာတော့ဖတ်မယ်။ Comment ဝေးလို့ C-boxမှာတောင် နှုတ်မဆက်နိုင်ဘူး."..ဆိုရင် လာကို လာမဖတ်နဲ့။ ဟုတ်ပြီနော်။””
“”အချိန်တွေပိုနေလွန်းလို့ အားအားရားရား ပို့စ်ရေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကို မသိသေးတဲ့လူတွေ သိပါစေ. ..... စာမှတစ်ဆင့် အတွေ့အကြုံယူနိုင်ကြပါစေ.....ဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ရေးနေတာ။
ဟိုတစ်ခါ ကျမ အရမ်းပျော်နေပါသည်။ Post တင်တုန်းက ပွစိပွစိလာလုပ်ကြတယ်။ ငါတို့လည်း အမာခံပိရိသတ်ပါပဲဆိုပြီး။ အဲဒီအစ်ကိုကြီးအကြောင်း ထည့်ရေးတော့လည်း "ငါတို့ကြမပါဘူး" ဆိုပြီး G-talk မှာစကားနာလာထိုးတဲ့လူက ထိုးသေးတယ်။
“”တော်ပြီ။ တော်တော်စိတ်ကုန်သွားပြီ။ အခုကစပြီး Blogကို Anybody Permission ပေးသင့်မသင့်စဉ်းစားတော့မယ်။
အဲလောက် ကြောတဲ့လူတွေ လာဖတ်မယ့်အစား Only blog authors ပေးပြီး ကိုယ့်ဟာကို တစ်ယောက်တည်း ဖတ်တာပဲ ကောင်းမယ်လို့ စဉ်းစားနေတယ် ။
ဒီအချိုးမျိုး ထပ်ချိုးနေကြသေးရင် Blog ပိတ်တော့မယ်။ ကျမကို ချစ်တဲ့၊ ခင်တဲ့ အမြဲတမ်းစာဖတ်ပိရိသတ်တွေကို အားနာပေမယ့် သူများအကြောခံပြီး ပို့စ်မရေးနိုင်လို့ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်တော့မယ်။””
မှတ်ချက်၊ Blog မှာ ရှိတဲ့ Life Traffic Feed က Link တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘယ်သူတွေ ကျမကို လာကြောနေ၊ လာရင့်နေလည်းဆိုတာကို စုံစမ်းနိုင်တယ်သိလား။ Geo Country counterနဲ့ Hit countersတွေ တစ်နေ့တစ်ခြား တက်နေတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လည်း လူတွေလာလား၊ မလာလားကို သိနိုင်တယ် ဟုတ်။
Posted by My Wonderful Moral Thoughts at 10:52
Across from Hyde Park Corner roundabout, after the statue of the arch to enter Green Park, really want to find out arches above statue is, but it not really easy to find the answer.
၀က်ဝံ: တရုတ်လိုမတတ်လည်း ဂူဂယ်ရှိတယ်
Buckingham Palace is located in the shade on the north side of Park, isasimple one about the triangle hasalayer of green tree park, the vast majority of tourists come here is to take the opportunity to go through the Buckingham Palace, tourists should be madeaspecial trip is one of the few.
In addition to being here to Buckingham Palace, but also from here to Piccadilly Circus (Piccadilly Circus), the next time you come back to introduce the ring.
The Green Park's winter leaves falling all over the floor, this picturesque boulevard is at the end of Buckingham Palace.
Leaves falling all over...,
Somewhere at Green Park
To go in this direction can go to Piccadilly Circus. (Down Town)
Buckingham Palace was built in 1702, was originally built for the Duke of Buckingham as the site of Kent, Queen Victoria in 1837 moved to here, from Buckingham Palace has become the British royal family's residence, both office and home functions.
Living members of the royal family, including Queen Elizabeth and her husband the Duke of Edinburgh, as well as the royal staff.
I heard the Queen would like to know whether it is now Buckingham Palace, as long as the rise of the main entrance of the palace to see the top, if the hoisting of the royal family, and indicated that the Queen is inside, and if not that go out to the Queen.
On that day, only to see the British flag, should not be about the Queen was not in the palace, I guess. Probably She was in Windsor Castle as her second home in UK.
Since 1993, Buckingham Palace, opening up the throne room, concert halls and banquet halls for visitors into the garden, which is due to Windsor Castle fire, it is necessary to fix the cost is enormous, the Queen had to break the dynasty precedent, open to the public to visit income derived from the Windsor Castle as repair funding.
Buckingham Palace every morning at 11:30 (10:00 Sundays) of the Guards handover ceremony is the most frequently visited, of course, is no exception to the early and came to Buckingham Palace, seems to have come late, and Buckingham Palace have been completely tourists surrounded.
Monument positive long way. If with this long-winged goddess of stations in the same direction, you can seeawide range of Road The Mall.
The plaza in front of the palace had been packed with tourists waiting for emerging Guards. Plaza Center isagolden angel, eye-catching monuments of Queen Victoria (Queen Victoria Memorial)!
People waiting for Guards come along!!! Camera Ready..
Palace surrounded by tourists, but also continued influx of landing one after another, this is the square in front of the palace.
The Guard, from spring to autumn, held every day; from autumn to spring every day. Today, the Guard time for 11:30 am.
Male Police Rangers
Spirited female Rangers
Guards & Red hat military band.
They all looked great in their uniform!!
Red Hat military band...
The left side of the black part of the problem rather than the camera exposure, it is fence railings, which is about five or six tourists toe outside at palace shot.
Black hat withamilitary band
Playing national anthem..,
Salute before to play national anthem!!!
Guards have their own Web Site: Takealook at Here.
Exciting to see the Guard in advance. Of course, we must first arrive at Buckingham Palace to seize favorable good location, good position to appreciate in the face of the left side of the palace.
As guards and military band will come from this direction, that is, from the birdcage Road (Birdcage Walk) the direction of the palace to move forward, and then, after the statue before entering the Palace Square, but the road to appreciate the Yingzi Guards.
They will leak at the Imperial Palace guards inside the handover event, as well asamilitary band playing after the handover performances.
Because this time outside the fence of the palace has not enteredacrowded. So will be trade-offs, depending on the march Guards or the transfer of the fence to see only two options I had.
I would suggest to occupy the middle of the fence around the inner ring to appreciate the Guards, more worthy of view, to wait until after the ceremony guard and bands along THE MALL leave, this time can be followed byacamera.
Heard at Buckingham Palace on the square in front of the monument in front of Queen Victoria isavery good location, can be condescending. Find it too far, but if there isalong lens should beagood stand location!
If you can spare two or three minutes time to takealook Guard changes video footage, go here to look at it in YouTube. Enjoy!!!
Posted by My Wonderful Moral Thoughts at 06:00
Twinings Tea and Coffee
Store seems small, the vicinity of the court is in addition toalaw firm with the bank.
Do you fancy cup of tea???
Put the kettle on, i am dying to haveatea.
English people cannot live without tea. Yeah!!!
Of course, I am sure english tea are popular around the world as well. No doubts!!
Prior to the United Kingdom have heardalot of well-known tea, such as:
* Whittard: Since this store everywhere in the United Kingdom, and I date back to the urban areas to take photographs properly introduced.
* Twining: The most famous is Earl Gray. If the cakes eaten white wooden huts, which will be accompanied by several packets of tea bags. British supermarket to buy to obtainatea, good luck to buy special box of 50 packets of tea bags as long as £1, the only drawback is that the types of supermarkets to sell more than Whittard.
* Harrod's: Will post with pictures soon. In fact, my favourite!!
* Fortnum & Mason: Too few to introduce with pictures. My 2nd favourite.
Very clear, which is to introduceaTwinings. My boyfriend and his family use Twinings only for tea. This is the main reason i was here to getafew tea bags for them. And then put it on blog for my web diary.
Twinings tea is not difficult to buy in Boston as well, the impression that the whole store to buy together, the price seems to be not expensive at all. For me, Of course!! Not sure for others people unless they like to used money on good quality.
In London there isaTwinings Tea House, the location on the opposite the Royal Court.
Right and left open the door is long commodities cabinets, aisle width it probably three or four individuals. Come to an end will haveaplace to drink tea.
However, asaperson I did not drink tea lady of life, boughtabox of tea of coffee with the Count left. Because supermarkets sell tea bag. But of course Twinings is different, So came to buy tea!
This side ofanumber of flower nectar, but also the most famous Earl Gray. This kind of packaging are more common, at least I used to buy the packaging isalong way.
This side has not imported packaged. Tea bag insideabox of 50 bags, look on the very texture, and the carton lid oradouble, and brought gifts to really look good, ah ha haa!!
Price although it's not expensive, but the quality of tea is not bad. (I drink you up like this ...)
Time ago to go to study every morning,acup of tea with lovely bubble, so the cupboard where the possession ofalot of tea bags. Now my cupboard there are still many bags every day for different kinds of attempts to hurry up and finish the tea bags in order to open my tea to taste. Especially for my lovely boyfriend!!
Posted by My Wonderful Moral Thoughts at 22:01
Older Posts Subscribe to: Posts (Atom) မြန်မာသက္ကရာဇ်
၁၃၇၀ ပြာသို လ္ဆုတ် ၆ ရက် - 16-Jan-2009
(Since March, 2008)
ဤဘလောဂ့်ကို ကွန်ယက် ဒိုင်ယာရီအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း သက်သက်မျှသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒီဘလောဂ့်ကို လာရောက် ဖတ်ရှုဖို့ မဖိတ်ခေါ်သလို ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လာရောက် ဖတ်ရှုကြတဲ့ သူများ အနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထင်မြင်နိုင်ပြီး သဘောထား ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။
မကြိုက်ရင် ဒီဘလောဂ့်ကို မလာပါနဲ့။ ဒီနေရာမှာ သုံးမယ့် အချိန်ကို တခြားမှာ သုံးလိုက်ပါ။
လာဖတ်လိုက်လို့ စိတ်ထဲ မကျေမနပ် ဖြစ်သွားရတယ် ဆိုရင် အဲလို ခံစားရတဲ့ လာဖတ်သူရဲ့ အရှုံးပဲ။ ဘာမဖြစ်ဘူး ဖတ်တယ် ဆိုရင် ဒီဘလောဂ့်မှာ သုံးလိုက်ရတဲ့ အချိန်အတွက် မရှုံးဘူးပေါ့။
အချိန်ဆိုတာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အတွက် အကျိုးရှိစွာ သုံးတတ်နိုင် ကြပါစေ။
SMNTL သည် SMNTL နာမည်ဖြင့်လည်းကောင်း နာမည်ဆင်တူရိုးမှား သို့မဟုတ် တခြားနာမည်ဖြင့်လည်းကောင်း ဘယ်ဘလောဂ့်ရဲ့ Cbox မှာမှ နှုတ်ဆက်ခြင်း ပိုစ့်အသစ် ကြော်ငြာခြင်းနှင့် ကွန်မန့်ရေးခြင်း လုံးဝ လုံးဝ မရှိပါ။
အကယ်၍များ SMNTL နာမည်ဖြင့်လည်းကောင်း နာမည်ဆင်တူရိုးမှား သို့မဟုတ် တခြားနာမည်ဖြင့်လည်းကောင်း လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Cbox မှာဖြစ်ပစေ ဘလောဂ့်ပေါ်မှာ ဖြစ်ပစေ တစုံတခု ရေးသွားခြင်းမျိုး ရှိပါက ဤဘလောဂ့်နဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်း လုံးဝ မရှိကြောင်း အသိပေး အပ်ပါတယ်။
ကျွန် သို့မဟုတ် အစေခံ
Posted: 13 Jan 2009 07:13 PM CST
ဒီဘလောဂ့်မှာ ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း လူတွေ မဖတ်မှာ စိုးရိမ်စရာ မလိုဘူး။
ကိုယ့်ဆီမှာ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ် စားနေကြပြီး ကျွန်လုပ် အစေခံခြင်တဲ့ သူများက ဘလောဂ့်တကာပေါ် ကိုယ်ပိုစ့့််ကို အချိန်ကုန်ခံပြီး လိုက်ကြော်ငြာပေးနေလို့ပဲ။ အဲဒီအတွက် Link ကိုရပြီး စာလာဖတ်ကြသူများကို ကျေးဇူးပါ။
ပြောခြင်တာ တခုက ကိုယ့်ဆီမှာ အပြင်လောကမှာတင် ကျွန်လုပ် အစေခံခြင်တဲ့သူတွေ လုပ်ပေးနေသူတွေ ရှိနေရုံမက အင်တာနက်ပေါ်မှာပါ လာပြီး ဘာမှပြောစရာမလိုပဲ ကျွန်လုပ် အစေခံလာကြတော့ ကိုယ့်ရဲ့ POWER လို့ပဲ ဆိုရမှာပေါ့။
ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့။ ဒီလောက်တောင် ကိုယ်အတွက် အချိန်ကုန်ခံပြီး ကျွန်လုပ် အစေခံ ကြော်ငြာပေးသူတွေ ရှိနေတာ ပိုစ့်အသစ်များများ တင်နိုင်အောင် အချိန်ပေးပြီး ရေးနိုင်အောင် ရေးမယ်။ ဟုတ်ပြီလား။
စကားမစပ် ကိုယ်အကြောင်းကိုလဲ Cbox တွေမှာ အချိန်ကုန်ခံပြီး စောက်တင်းပြောဖို့ စောင့်နေသူများ အတွက်လဲ New Subject ရတာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား။
မင်းတို့ဘာပြောပြော ဘယ်လိုရေးရေး ကိုယ်ကတော့ လှလှလေး ပြုံးနေလိုက်တယ်။ အချိန်ကုန်ခံပြီး စောက်တင်းပြောကြတဲ့ မင်းတို့ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်လိုက်လို့ပဲ။
P.S: နောက်ပိုင်း ဒီလိုမျိုး ရေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကို စောက်တင်းပြောသူတွေ ကိုယ့်ဆီ ကျွန်လုပ် အစေခံခြင်တဲ့ သူတွေကို အသိအမှတ် ပြန်ပြုသလို ဖြစ်နေတယ်။
တကယ်တော့ ကိုယ်က ဘယ်သူတွေ ကိုယ့်အကြောင်းကို ဘာပြောပြော ဘာရေးရေး နဲနဲလေးမှ စောက်ဂရုကို မစိုက်တာ။ :))
အခုရေးလိုက်တာက ဘယ်လို အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဘလောဂ့်မှာ စာလာဖတ်ကြသူများကို ကိုယ့်ဆီမှာ အင်တာနက်ပေါ်မှာတောင် အချိန်ကုန်ခံပြီး အလကား ကျွန်လုပ် အစေခံချင်သူတွေ ရှိကြောင်း အသိပေးတာပါ။
တဆက်ထဲ ပြောလိုက်ချင်တာက SMNTL သည် SMNTL နာမည်ဖြင့်လည်းကောင်း နာမည်ဆင်တူရိုးမှား သို့မဟုတ် တခြားနာမည်ဖြင့်လည်းကောင်း ဘယ်ဘလောဂ့်ရဲ့ Cbox မှာမှ နှုတ်ဆက်ခြင်း ပိုစ့်အသစ် ကြော်ငြာခြင်းနှင့် ကွန်မန့်ရေးခြင်း လုံးဝ လုံးဝ မရှိပါ။
SMNTL posted the above post on 13th January 2009
လုပ်ရဲ..ရေးရဲသူကိုတော့ သက်ပြင်းချမိပါရဲ့ ...